တရုတ်အတွင်းပိုင်းကြမ်းခင်းဘုတ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | ရွှေတံဆိပ်
Wood Plastic-Composites ကို WPC ဟုအတိုချုံးထားသည်။ သစ်သား၊ ပလတ်စတစ်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောပစ္စည်းထုတ်ကုန်သစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော၊ ရေစိုခံ။ တိတ်ဆိတ်စွာစိုထိုင်းသောကြမ်းခင်း၏တကယ့်သုည formaldehyde တစ်ခုဖြစ်သည်။
သစ်သား - ပလပ်စတစ်ကြွေပြားခင်းခြင်း (WPC Flooring) ဟုခေါ်သောသစ်သားသို့မဟုတ်ဗီနိုင်း tile ကြမ်းခင်းသည်ကြမ်းတမ်းသောအမာခံကြမ်းခင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုထားသောပျော့ဖတ်နှင့်လေသို့မဟုတ်ပေါ်လီမာဖွဲ့စည်းမှုများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းကိုတခါတရံသစ်သားပေါ်လီမာအလွှာပါးအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်ပေါ့ပါး။ အနိမ့်သိပ်သည်းမှုတည်ဆောက်ပုံသည်နွေး။ ပျော့ပျောင်းသောခြေထောက်တွင်အဆင်ပြေသည်။
လက်စွပ်သော့ခတ် Timber SPC Flooring ကိုနှိပ်ပါ
ဝါးအမျှင် / အင်ဂျင်နီယာသစ်သား
900 * 150mm, 1215 * 200mm, 300 * 150mm
0.037mg / m3
Soundproof၊ မီးခံနိုင်ခြင်း၊ ချော်ခြင်း၊ ချုံ့ခြင်း၊
ဂေဟဗေဒ - အဆိပ်မရှိသော၊ Formaldehyde နည်းသည်၊ လေးလံသောဒြပ်စင်များမရှိ၊ ပျော်ဝင်နိုင်သောမတည်ငြိမ်သောအရာများမရှိပါ
ကျန်းမာသော: ပibိဇီဝဆေးများ, မှိုဒဏ်ခံ, Anticorrosive, အနံ့မရှိပါ
Safe: non- ချော, Anti-stat, ရေစိုခံ, မီး - ဒဏ်ခံ
အဆင်ပြေ: အပူချိန်အဆက်မပြတ်သင့်လျော်သော elasticity၊ စုပ်ယူမှုနှင့်ဆူညံသံလျော့ချခြင်း
WPC ကြမ်းပြင် Panel တပ်ဆင်ခြင်းအကြောင်း :
အလွှာရှိကလစ်နှိပ်စနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချက်တည်းနှိပ်ခြင်း၊ နှစ်ချက်နှိပ်ခြင်း၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည်လွယ်ကူစွာသော့ခတ်နိုင်ပြီးတည်ငြိမ်မှုလည်းရှိသည်။
နံရံ panel နှင့်ကြမ်းခင်းကိုကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများတွင် ၁၅ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးကြမ်းခင်းနယ်ပယ်တွင်နာမည်ကောင်းရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် USA နှင့်ဥရောပစျေးကွက်တွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လက်ခံနိုင်လောက်သောပိုမိုကောင်းမွန်သည့် Virgin 100% သာပစ္စည်းကိုသာအသုံးပြုသည်။
R&D စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အစစ်အမှန်အင်ဂျင်နီယာကြမ်းခင်း (သို့) သဘာ ၀ ကျောက်တုံးနှင့်အုတ်ကြွပ်များကို အခြေခံ၍ စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများကိုတီထွင်နိုင်သည်။
စက်ရုံရှိပြီးပြည့်စုံသောစစ်ဆေးမှုအခန်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် WPC Floor, SPC Floor အတွက်စစ်ဆေးမှုအများစုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပူချိန်ထိန်းချုပ်သောတပ်ဆင်ခြင်းစမ်းသပ်ခန်းတွင်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် -20 80 မှ 80 between အကြားရှိ installation လုပ်ဆောင်မှုကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်;
ကျွန်ုပ်တို့သည် SGS နှင့်တတိယပါတီအနေဖြင့်ကာလအပိုင်းအခြားအလိုက်မကြာခဏအခါအားလျော်စွာအောက်ပါတို့ကိုစမ်းသပ်သွားမည်ဖြစ်သည် - ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ရေး၊ ဖန်းဂတ်စ်ဆန့်ကျင်မှုစမ်းသပ်မှု၊ REACH၊ ၀ တ်မှုန့်၊ ဓာတုခံနိုင်ရည်၊ IIC & STC၊ အသံလျှော့ချခြင်း၊
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ & ဆက်သွယ်ရန်
၁။ မေး။ မင်းရဲ့ကြမ်းခင်းအာမခံကဘာလဲ။
A: ကျွန်တော်တို့ကြမ်းပြင်မှာ ၁၀၀% အပျိုစင်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
အကယ်၍ လူနေအိမ်အတွက်သင်အသုံးပြုပါက ၀.၃ မီလီမီတာအ ၀ တ်အထည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ အာမခံသည် ၂၅ နှစ်ဖြစ်သည်။
သင်စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုပါက ၀.၅ mm mm wear layer ကိုသုံးသင့်ပါသည်။ အာမခံသည် ၁၅ နှစ်ဖြစ်သည်။
၂။ မေး။ ။ မင်းရဲ့ကြမ်းပြင်ဟာမင်းရဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုတာငါဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့၏နိယာမမှာအရည်အသွေးသည်ပထမဖြစ်သည်၊ သင်၏အကဲဖြတ်မှုအတွက်အခမဲ့နမူနာဖြစ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုအတွင်းအဆင့်တိုင်းသည် QC အဖွဲ့မှတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားပြီး Floor Score, CE Certificate နှင့် SGS သည်သင်၏ရည်ညွှန်းချက်အတွက် senT ဖြစ်နိုင်သည်။
3.Q: မင်းရဲ့ MOQ ကဘာလဲ။ ငါဘယ်နှစ်ယောက်အရောင်ရွေးချယ်နိုင်သည်?
MOQ သည် E- ကက်တလောက်မှအရောင် ၄-၆ ရောင်ရှိသည့်အနံ ၂၀ 'ကွန်တိန်နာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်၏ပမာဏသည်ကွန်တိန်နာတစ်ခုထက်နည်းလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်အရောင်မှ 500sqm သို့မဟုတ် E-catalog မှ 1000sqm ကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။
4. မေး: သင်ကြမ်းပြင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုပေးနိုင်သလား။
ဖြေ - ဟုတ်တယ်။ စကိတ်၊ EVA စာရွက်သို့မဟုတ်ဖော့ဆို့စသည်တို့ကဲ့သို့သောကိုက်ညီသောပရိုဖိုင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားတစ်နေရာတည်းဝန်ဆောင်မှုများပေးမည်ဟုကတိပေးသည်။
5. မေး: နမူနာရရှိနိုင်ပါသလား
ဖြေ။ ။ အခမဲ့နမူနာရရှိနိုင်ပါသည်။ နမူနာများကိုသင်၏စတော့ရှယ်ယာမှတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်လိုအပ်သောအရောင်ဒီဇိုင်းနှင့်အညီနမူနာကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်။
ရှေ့သို့ မိုးလုံလေလုံကြွေပြားဘုတ်အဖွဲ့ WPC
နောက်တစ်ခု: အတွင်းပိုင်းကြမ်းခင်း WPC